- UK 2021 ✅ phambili Isu leBlackjack
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Blackjack » Isu leBlackjack
Ungadlala kanjani ukuzinikela kokuqala ku-blackjack
Idlalwa kanjani ukuzinikela sekwedlule isikhathi ku-blackjack
Kusho ukuthini ukuzinikela emdlalweni
Bhanqa Icebo Lokuhlukanisa eBlackjack
Yimiphi imithetho yekhasino yokuhlukanisa umbhangqwana?
Idlalwa kanjani ihlukane ngababili
Kungani ukwehlukanisa kusebenza kubadlali abaningi?
Isu leBold Blackjack
Isu Lokuvikela I-Blackjack
Isu Elicasulayo Lokuqhekeka kweBlackjack
Ukuphinda kabili phansi ku-Blackjack
Isebenza kanjani isu eliphansi
Iyini imithetho yekhasino lapho uqeda okuphindwe kabili phansi
Phinda kabili okungenani kumakhadi ama-3
Phinda kabili ngaphansi
Ubuhle nobubi bokuphinda kabili phansi
Isu Lokuma Nokuma Lapho Udlala i-Blackjack
Yini okufanele uyazi ngezandla ezilukhuni?
Isu Lomshuwalense Kanye Nemali ye-Blackjack
Yimiphi imithetho eyisisekelo lapho udlala umshwalense?
Yimiphi imithetho eyisisekelo lapho udlalela ngisho nemali?
Uma udlala noma yiluphi uhlobo lomdlalo, nakanjani ‘ukuwo ukuze uwunqobe’. Lokhu kuyiqiniso futhi uma kukhulunywa ngokudlala umdlalo we-blackjack. Ngaphambi kokuzama ukuhlala etafuleni noma ukuvula iklayenti lomdlalo, kufanele ube naleyo mindset nokuzibophezela ukunqoba nokushaya umkhawulo wendlu. Kepha unqoba kanjani emdlalweni odinga ikhono elithile kanye nethuba? Wehlisa kanjani umkhawulo wendlu ukuze uzuze?
Ukuze kwenzeke lokhu, kungcono ukuthi wazi amasu ayisisekelo we-blackjack futhi ufunde ukuthi ungalisebenzisa kanjani isu ngesikhathi esifanele, ezimeni ezifanele. Okubalwe ngezansi amanye amasu adumile we-blackjack adlalwa ngabathandi abaningi, nezimo zesampula lapho ungasusa khona.
Kunokuhamba noma amasu athile asetshenziswa kumdlalo we-blackjack, kepha kukhona okuthola izingxoxo ezihlukaniswe kakhulu- ukuzinikela. Yebo, kuyaqondakala ukuthi kungani abadlali abaningi begxeka ngaleli su. Okokuqala, igama lecebo liyangabazeka futhi limbi. Cabanga, ucelwa ukuthi unikele ngesandla sakho.
Kubadlali abaningi be-blackjack, lokhu kuhamba akunakucatshangwa ngoba into eyinhloko lapho ubamba iqhaza emdlalweni ukunqoba nokushaya indlu. Le nketho (noma isu) ingaba nokuchazwa okungekuhle kepha khumbula ukuthi kunengqondo ezimeni ezikhethekile futhi uma idlalwe kahle. Ngakho-ke isebenza kanjani inketho yokuzinikela ku-blackjack? Nasi isimo sesampula esichaza ukuzinikela:
Ngemuva kokubheka inani lesandla kanye ne-up-card yomthengisi wekhasino, ubone ukuthi unethuba elincane lokuwina. Inketho ekhanya kakhulu ukulahla isandla esidinga ukunikelwa kwesigamu semali ebhejelwe eyenziwe. Kunezindlela ezimbili zokuthi uzoxhumana kanjani nesinqumo sakho:
Kumakhasino wendabuko nodaka, kungadingeka ukuthi umemezele ngomlomo kumthengisi wekhasino ukuthi ufuna ukusizakala ngalokhu kunikezwa
Kwamanye amakhasino, ukusetshenziswa kwezimpawu zesandla kungadingeka ukukhombisa inhloso yokusebenzisa isici sokuzinikela
Noma ngabe iyiphi inketho ekhethwe umdlali, kungumsebenzi womthengisi ukususa isigamu sokubheja nokususa amakhadi amabili etafuleni bese uwafaka kulawo threyi yokulahla. Ngamafuphi, lapho usebenzisa ngokunenzuzo inketho yokuzinikela, unika ilungelo lokudlala isandla, bese ulahlekelwa ngokuzenzakalela uhhafu wenani lakho lokubheja.
Manje, kunezindlela ezimbili zokuthi ungadlala kanjani ukuzinikela kwakho kumdlalo we-blackjack- ungakhetha ukuzinikela kokuqala nokuzinikela sekwedlule isikhathi.
Lesi isipho esithandwayo kumakhasino amaningi asebenza e-Asia nase-Europe. Njengoba igama liphakamisa, le nketho ithokozelwa ngaphambi kwesikhathi nangaphambi kokuba umthengisi ahlole isandla sakhe ukuthola i-blackjack engenzeka. Banikezwe ithuba, abadlali kufanele bacabangele ukuzinikela kusenesikhathi ngoba lokhu kuvuma kakhulu futhi kunikeza abadlali ithuba elingcono lokuwina.
Uma ukhetha ukuzinikela kusenesikhathi ulwa ne-Ace, ukwanda kwamathuba akho ngamaphesenti angu-0.39, bese uzinikela ngokumelene no-10, kungamaphesenti angu-0,24, ukukhuphula kufinyelele kumaphesenti angu-0.63 lapho udlala ngomdlalo we-blackjack onezitezi eziyisithupha.
Uma kwenzeka kunikelwa kusenesikhathi etafuleni, izandla ezilandelayo kufanele zinikelwe:
Uma kungqubuzana ne-Ace, zinikele kanzima ama-5 kuye kwayi-7 kanye nama-3, no-12 kuye ku-17, kufaka phakathi ama-6s kuye kuma-8
Ngokumelene ne-9 yomthengisi, zinikele kanzima ku-10 kuye ku-6, kepha yeqa ama-8
Ngokumelene ne-10 yomthengisi, zinikele kanzima kwe-14 kuye ku-16, kufaka phakathi ama-7s no-8s
Ekuzinikeleni sekwedlule isikhathi, uzokwazi ukujabulela le nketho uma umthengisi esevele ehlole ikhadi lakhe ukuthi alinayo i-blackjack. Uma isandla somthengisi sesivele iyi-blackjack, khona-ke le nketho ayisatholakali, futhi umdlali uzolahlekelwa ukubheja ngaphandle kwalapho kuyi-blackjack futhi. Uma uthatha isinqumo sokusebenzisa le nketho, umkhawulo wendlu wehliswa ngamaphesenti ayi-0.07 lapho udlala imidlalo enezitezi eziningi.
Ukuthatha inketho yokuzinikela kunezinzuzo eziningi ngaphezulu kokuncishiswa komphetho wendlu. Uma uwusebenzisa ngokunenzuzo lo mnikelo, uthola ithuba lokusimamisa i-bankroll yakho, futhi unganciphisa ukulahlekelwa kwakho etafuleni.
Abanye bazothi ukuzinikela kuyisinyathelo sesiwula uma kukhulunywa ngokudlala etafuleni le-blackjack. Lena yimibono engenasisekelo; uma ucabanga ukuthi kuyisinyathelo esifanele ukudlala, bese ukhetha ukuzinikela ukuze uvikele i-bankroll yakho.
Leli isu elilodwa elingaqondakali kahle futhi lingahlaziywa ngabadlali abaningi. Abanye abadlali abalisebenzisi leli thuba, kanti kwabanye, bahlukanisa izandla zabo ngaphandle kwesizathu noma inzuzo yalokhu. Lokhu akufanele kube njalo ngoba isu lokwehlukanisa lenzelwe abadlali abafuna ukwehlisa umkhawulo wendlu.
Imithetho yokwehlukanisa kulula ukuyiqonda. Uma unikezwa amakhadi amabili anenani elifanayo, unenketho yokuwahlukanisa ezandleni ezimbili. Isibonelo, uma ubheja u- $ 6 bese uthola ama-3s, isandla sakho esisodwa sinenani elingu-6. Ngaphansi kwemithetho yekhasino, ungadlala isandla njengo-6 bese uthola amakhadi angeziwe, noma ungahlukanisa ama-3 ezandleni ezimbili.
Uma ufuna ukusebenzisa le nketho, umane ubeke okunye ukubheja okulinganayo eduze kokubheja kwangempela kusakhiwo. Lokhu kusho ukuthi udinga ukubeka enye i- $ 6 eceleni kwe-wager yangempela, hhayi ngaphezulu kwayo. Lokhu kusebenza njengesiginali kumthengisi ukuthi ufuna ukuhlukanisa ama-3s, futhi ufuna ukudlala izandla ezi-2. Emithethweni eyisisekelo ye-blackjack, kuzodingeka udlale kuqala isandla sakho sokudla.
Ngaphambi kokusebenzisa ukuhlukaniswa kwamapheya, kufanele wazi kuqala inani lamakhadi asetshenzisiwe nemithetho yemidlalo ekhona. Ngemuva kokuthola yonke le mininingwane, ungabheka lezi ziphakamiso ezilandelayo ngaphambi kokuzama ukuhlukanisa:
Uma udlala kudeski elilodwa ne-NDAS, une-3-3, futhi ikhadi lomthengisi elingu-7.
Uma udlala kumdlalo wesiteji esiphindwe kabili nge-DAS, une-4-4, futhi ikhadi lomthengisi elingu-5.
Uma udlala emgodini wesithupha nge-DAS, une-a9-9, futhi ikhadi lomthengisi elingu-5.
Ungahlukanisi uma udlala ngomdlalo onezitezi ezimbili nge-NDAS ephethe u-4-4 kanti i-up-card iyi-5.
Kunezizathu ezithile zokuthi ukuhlukaniswa kungakusebenzela:
Ngokuqhekeka, ungawina okuningi ngokwesilinganiso usebenzisa isu elinesibindi, noma
Lahla imali encane ngokwesilinganiso usebenzisa isu lokuzivikela, noma
Ungaguqula kalula isandla esilahlekile sibe esiphumelelayo usebenzisa isu elihlaselayo
Ngezansi kunencazelo emfushane nokwehluka phakathi kwamasu we-blackjack anesibindi, ahlaselayo navikelayo.
Kuleli qhinga, usuvele usesimweni sokuwina, futhi lapho uthatha isinqumo sokuhlukanisa, uzowina imali eningi.
Lokhu kudinga ukubheja okuningi etafuleni ukuze unciphise ukulahlekelwa. Lokhu kungabonakala kuyindlela eyinkimbinkimbi yokuqhekeka, kepha kunengqondo ngokuhamba kwesikhathi. Isizathu salokhu kuthutha ukuthi noma uzolahlekelwa yimali isikhathi eside lapho uhlukana ngokuzivikela, uzolahlekelwa okuningi uma ungahlukani.
Leli isu elinconyelwe kakhulu uma kukhulunywa ngokuqhekeka ngoba unethuba lokuguqula isandla esilahlekile sibe sesimweni sokuwina.
Njengomthetho ojwayelekile, ukwehlukana emdlalweni we-blackjack kungenye indlela yamasu angavumela ukuthi uguqule isikhundla esilahlekile sibe esinqobayo. Khumbula ukuthi ekuhlukaniseni, ungathola imali eningi ngokuhlukana okuningi, kepha kungagcina sekusele kancane kwezinye izinqumo zokuhlukanisa. Leli iqhinga elibucayi okufanele wonke umdlali alazi ngaphambi kokuba azame ukudlalela imali yangempela, noma ngaphambi kokudlala nabadlali abanesipiliyoni.
Ubuwazi ukuthi uma udlala i-blackjack, ungama kuphela ukuwina cishe amaphesenti angama-47 (kungafaki izibopho) kuzo zonke izandla onikezwe zona? Manje, uma wenza izibalo, kusho ukuthi ekuhambeni isikhathi eside, usekupheleni komdlalo. Kepha kunendlela yokuphuma kule nkinga, futhi lokho kungukusebenzisa isu eliphindwe kabili le-blackjack.
Ngecebo eliphindwe kabili phansi, umdlali unikezwa ithuba lokuphinda kabili ukubheja ukuze athole ukuma ngemuva kokuthola ikhadi elilodwa ngaphezulu. Ukubheja okwengeziwe kufakwa ebhokisini eliseduze nokubheja kwasekuqaleni. Lapho udlala kumakhasino wezitini nodaka, ungahle udinge ukubeka ama-chips angeziwe eceleni kokubheja kwangempela ngaphandle kwebhokisi lokubheja, bese ulikhomba ngomunwe owodwa.
Lapho umthengisi wekhasino ekuvumela ukuthi uphindaphinde kabili, kusho kuphela ukuthi ungakuphinda kabili ukubheja ngokushintshanisa elinye ikhadi. Kumakhasino amaningi, umthengisi uzovumela abadlali ukuthi baphinde kabili kunhlanganisela yamakhadi amabili, kepha amanye amakhasino angavimba lolu khetho ezandleni ezithile. Ungathola amadili amahle kakhulu uma ungadlala ekhasino ekuvumela ukuthi uphindaphinde kabili kunoma imaphi amabhangqa.
Nomaphi lapho udlala khona, udinga ukukhumbula ukuthi kunezinhlobonhlobo ezimbili okufanele zidlale lapho ucubungula leli qhinga. Okokuqala, udinga ukubheka inani eliphelele lesandla sakho kanye ne-up-card yomthengisi. Uma kungenzeka, udinga ukuphinda kabili uma uphethe u-8, 9, 10, noma u-11 onzima, noma uphethe i-13 (A-2) ethambile nge-18 (A-7).
Udinga ukucabangela indlela yokuzivikela lapho udlala i-blackjack ngoba udinga ukucabanga ukuthi isandla somthengisi sizohlala sishaya izandla zakho. Umqondo wokuphindaphinda phansi ukusebenzisa isu elihlaselayo ngesikhathi esifanele lapho umthengisi wekhasino enethuba elikhulu lokuqhuma noma unomphetho esandleni somthengisi.
Ukuphinda kabili ezandleni ezithambile kunezinzuzo zako, kepha abadlali abaningi kaningi abakuqondi lokhu. Lapho uphinda kabili ezandleni ezithambile, inhloso akuyona okweqa umthengisi wekhasino, kepha ukuthola imali.
Kukhona amanye amakhasino avumela abadlali ukuthi baphinde kabili amakhadi amathathu noma ngaphezulu. Isibonelo, une-5-3 bese uthola engu-3 ngenani le-11; usengaphinda kabili phansi ngemuva kokudweba ikhadi lesithathu. Uma lokhu kutholakala kuwe etafuleni, ungathola amaphesenti angu-0.2.
Umqondo oyinhloko ophindwe kabili ukuthi uwuphinda kabili umholo wokuqala owenziwe. Kepha kukhona amanye amakhasino akuvumela ukuthi uphinde kabili ngenani elincane. Lokhu kusho ukuthi uma ukubheja kwakho koqobo kungu- $ 20, ungaphinda phansi kabili ngemali engaphansi kwalesi samba. Yize lokhu kuvunyelwe, khumbula ukuthi abadlali abanesipiliyoni abasincomi lesi sinyathelo. Inkinga yokuphindaphindeka phansi kokuncane ukuthi ngeke ikuvumele ukuthi ukwandise ukuzuza kwakho.
Uma uzimisele nge-blackjack, kubalulekile ukuthi uqonde umqondo wokuphindaphinda phansi. Uma isetshenziswe ngendlela efanele, isu eliphindwe kabili phansi lingakusiza wehlise onqenqemeni lwekhasino futhi uzuze imali eningi.
Isu eliphindwe kabili likuvumela ukuthi ubeke ukubheja okwengeziwe uma izandla zakho zinethuba elihle lokuwina. Ukuze ukhiphe lolu hlobo lwecebo, udinga ukuphinda ukubheja kwakho, okusho ukuthi uzozibeka engcupheni ngokwengeziwe uma unikezwa imininingwane ephambi kwakho. Kukhona nethuba lokuphinda kabili ngababili abahlukanisiwe, inqobo nje uma ikhasino ikuvumela.
Isibonelo, uma une-10-10 futhi umthengisi akhombisa ama-3,4,5 noma ama-6, khona-ke ungawahlukanisa ama-10s, kabili phansi ezandleni zombili futhi unethemba lokuthi uzothola ama-21 kukho kokubili.
Inkinga yokuphindeka kabili ukuthi uzobhekana nezingozi ezithile. Khumbula ukuthi umthengisi usenomphetho futhi unemininingwane eminingi ngesandla. Lesi yisizathu esenza ukuthi ikhasino ihlale igcina leyo mphetho kunabadlali. Futhi uma izandla ziboshiwe, umdlali angathembela ekubuyisweni kwesigxobo.
Lapho udlala i-blackjack, isinqumo sokugcina ozosibheka ekugcineni ukuthi kufanele ushaye noma ume. Le yingxenye yomdlalo inselelo yabadlali abaningi futhi evame ukuholela ekulahlekelweni lapho kwenziwa ngendlela engafanele.
Uma umusha kulo mdlalo wekhadi, kubalulekile ukuthi wazi imithetho eyisisekelo yekhasino maqondana nokushaya nokuma. Nayi eminye yemithetho ehlobene nokushaya nokuma ukuze ugcine engqondweni:
Uma uthatha isinqumo sokushaya, kusho ukuthi uzodweba elinye ikhadi
Uma umile, kusho ukuthi wenelisekile ngenani lesandla
Uvunyelwe ukuma noma ukushaya kunoma yiliphi ikhadi elinenani lama-21 noma ngaphansi
Kungumsebenzi wakho ukusayina kumthengisi uma ufuna ukushaya noma ukudweba usebenzisa amasiginali okuvunyelwane ngawo ngumzimba
Kunamasiginali afanele ongawasebenzisa uma amakhadi abhekelwa ubuso nobuso noma abhekiswe phansi
Uma uthatha isinqumo sokushaya futhi inani lesandla lidlula ama-21, isandla sakho siyakhishwa, futhi ulahlekelwa ukubheja kwakho
Okwamanje lapho u-oda isitandi, kuzoqedela isandla sakho kulowo mzuliswano
Lapho udlala i-blackjack, amanani wezandla amabi kakhulu ongawakha angama-12 kuya ku-17 aqinile. Lokhu kungenxa yokuthi uzolahlekelwa izandla eziningi kunokuwina ekuhambeni okude. Okuwukuphela kokuhlukile lapho udlala kumdlalo we-S17 okungenani onezitezi ezimbili lapho i-17 ibhekene no-6 ingumnqobi. Ngamafuphi, wonke la manani esandla kulindeleke ukuthi alahle. Ukubeka ngendlela efanele, kulindeleke ukuthi ulahlekelwe izandla ezi-4 kuzo zonke izandla eziyi-10.
Unalesi sithiyo engqondweni, umdlali we-blackjack unqoba kanjani futhi azethembe lapho edlala lo mdlalo? Njengoba ingekho indlela ongashintsha ngayo amakhadi, ongakwenza kunalokho ukulandela amasu ayisisekelo uma kukhulunywa ngezandla ezilukhuni nezithambile.
Njengomdlali, kufanele futhi ukuthi ufunde kabanzi mayelana nomshuwalense noma isu lemali. Lezi kubhejwa ezinhlangothini ezethulwe kulo mdlalo ukuvikela abadlali kwi-blackjack yomthengisi. Isinqumo sokubheja kumshwalense noma ngisho nemali kufanele senziwe ngaphambi kokuthi uthathe isinyathelo sokuzinikela, ukuhlukanisa, ukushaya noma ukuma.
Lapho nje umthengisi ememezela ikhadi le-Ace up, uzobuza abadlali ukuthi bafuna ukubheja umshwalense. Lokhu kungakhethwa futhi kubhejwa okuhlukile lapho uzobheja khona ukuthi ikhadi lomgodi lomthengisi wekhasino liyikhadi le-10 noma lesithombe.
Njengengxenye yokwenza, inani lokubheja ongalenza kumshuwalense liyingxenye yokubheja kwasekuqaleni okubekiwe. Uma ngemuva kokubheja komshwalense kutholakale ukuthi umthengisi unekhadi le-10 noma lesithombe, kusho ukuthi:
Ukubheja kwakho komshuwalense kuzokuzuzela izingqinamba ezi-2 kuye kwezingu-1, noma uwine inani elilingana nokubheja okwenziwe
Kepha uma umthengisi ememezela ukuthi akuyona ikhadi le-10 noma lesithombe, bese:
Ulahlekelwa ukubheja kwakho komshuwalense, bese udlala kabusha.
Ngisho nemali iba khona uma umthengisi ekhombisa i-Ace i-up-card futhi umdlali abe ne-blackjack. Uma kunjalo, umthengisi wekhasino uzobuza ukuthi uzothatha ‘imali ngisho’.
Uma uvuma, umthengisi uzokhokha ngisho nemali ekubhejeni okwenziwe, futhi amakhadi azosuswa ekudlaleni. Lokhu kusho ukuthi umthengisi uzokukhokhela kuqala ngisho nangaphambi kokuba azobheka amakhadi. Ngamafuphi, ukuhlelwa kwemali ngisho kufana nokwenza ukubheja komshuwalense uma une-blackjack.
Yize i-blackjack ithandwa kakhulu, abadlali nabathandi abaningi baziwa ngokungadlali kahle izandla
Ukuqinisekisa ukuthi abadlali bazoba nethuba elingcono lokwehlisa umkhawulo wezindlu nokunqoba, kubalulekile ukuthi babe necebo engqondweni
Uma abadlali befuna ukunciphisa onqenqemeni lwekhasino lube ngaphansi kwamaphesenti ama-1, kubalulekile ukuthi bafunde amasu ambalwa ahlobene nokuzinikela, ukuphinda kabili phansi, ukuhlukanisa, nokuma nokushaya
Kunezinhlobo ezimbili zokuzinikela ezingasetshenziswa ku-blackjack- ukuzinikela kwangaphambi kwesikhathi nangemva kwesikhathi
Uvunyelwe ukuhlukanisa isandla uma uthola amanani afanayo, yisho ama-4s amabili noma ama-5 amabili
Ekuphindeni kabili phansi, abadlali banikezwa ithuba lokuphinda kabili ukubheja kwabo
Ukubheja ngomshuwalense kungenziwa uma umthengisi ekhombisa i-Ace, futhi inani lokubheja liyingxenye yokubheja kwasekuqaleni